आजबाट नयाँ IPO खुल्दै , प्रतिकित्ता कति? कस्तो छ कम्पनीको वित्तिय प्रक्षेपण ? – Ap Nepal
कम्पनीले अंकितमूल्यमा २० रुपैयाँ प्रिमियम थपेर १२० रुपैयाँ दरले कुल ४ करोड ८९ लाख २४ हजार ७२० रुपैयाँबराबरको आईपीओ निष्कासन गर्दैछ। कम्पनीले कुल ४ लाख ७ लाख ७०६ कित्ता सेयर निष्कासन गर्नेछ।
जसमा २ प्रतिशतले हुन आउने ८ हजार १५४ कित्ता कर्मचारीका लागि र ५ प्रतिशतले हुन आउने २० हजार ३८५ कित्ता सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याइएको छ भने बाँकी ३ लाख ७९ हजार १६७ कित्ता सेयरमा सर्वसाधारणले आवेदन दिन पाउने छन्।
यो आईपीओमा सर्वसाधारणले नेपाल धितोपत्रबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका सम्पूर्ण सि–आस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु र तिनका तोकिएका शाखाहरुबाट आवेदन दिन सकिनेछ। यो आईपीओमा लगानीकर्ताले न्यूनतम १० कित्ता र अधिकतममा सम्पूर्ण कित्ताका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। धितोपत्र बिक्री प्रबन्धकमा एनएमबि क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। रुरु जलविद्युतको आईपीओमा निष्कासन बन्द छिटोमा चैत २४ गते र ढिलोमा वैशाख ३ गते बैंकिङ समयपछि हुनेछ।
यसअघि कम्पनीले गत माघ २१ गतेदेखि फागुन २१ गतेसम्म पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित क्षेत्र गुल्मी जिल्लाका बासिन्दाका लागि आईपीओ निष्कासन गरेको थियो। आयोजना प्रभावितलाई यो कम्पनीले कुल ४ लाख ७ हजार ७०५ कित्ता आईपीओ बिक्री गरेको थियो। आईपीओ निष्कासनपछि कम्पनीको चुक्तापुँजी ४० करोड ७७ लाख ५ हजार ५०० रुपैयाँ पुग्नेछ।
दोस्रो बजारमा जलविद्युत कम्पनीहरुको सेयरमूल्य उछाल आइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा रुरु जलविद्युतको आईपीओमा पक्कै पनि आकर्षण देखिन्छ। तर यो कम्पनीले लगानीकर्ताहरुलाई कतिसम्म रिटर्न दिन्छ त भन्ने आँकलन गर्न यसको वित्तीय प्रक्षेपण हेर्न आवश्यक छ। यो कम्पनीले खु्द नाफा आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म ५ करोड ७१ लाख रुपैयाँ पुर्याउने अनुमान गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा यो कम्पनीको खुद नाफा ५ करोड ८५ लाख रुपैयाँ हुने लक्ष्य राखिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा भने खुद नाफा ६ करोड ३४ लाख हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।
कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी अर्ब ३ वर्ष अर्थात आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १४.०१ रुपैयाँ हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा १४.३६ रुपैयाँ ईपीएसको लक्ष्य राखिएकोमा आगामी वर्ष भने १५.५७ रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको छ। कम्पनीले प्रतिसेयर नेटवर्थ आव २०७९/८० सम्म १३०.४७ रुपैयाँ हुने प्रक्षेपण गरेको छ। चालु आवमा १२०.९० रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको प्रतिसेयर नेटवर्थ आगामी वर्ष भने १२६.४७ रुपैयाँ हुने लक्ष्य राखिएको छ।
नेटवर्थमा प्रतिफल भने आव २०७७/७८, २०७८/७९ र २०७९/८० मा क्रमशः ११.८७ प्रतिशत, १२.३१ प्रतिशत र १०.७४ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। विगत ३ वर्षको नेटवर्थमा भएको औसत प्रतिफल भने ११.४७ प्रतिशत रहेको छ। कम्पनीको रिजर्भमा आव २०७९/८० सम्म ११ करोड ६० लाख रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको छ। चालु आवमा भने ७ करोड ७० लाख रुपैयाँ रिजर्भमा हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।
यो कम्पनीमा संस्थापक सेयरधनीको हिस्सा ८० प्रतिशत रहेको छ भने आयोजना प्रभावित स्थानीय र सर्वसाधारणको १०/१० प्रतिशत हुनेछ।
Prevमदन कृष्ण श्रेष्ठले यस्तो भनेपछी समाल्न सकिनन् आफुलाई अंगालो हालेर यसरी रो*ईन्- वियोन्स (हेर्नुहोस भिडियो सहित)
Nextअ र्कैसंग भागेको आरोप लागेकी श्रीमती २ महिना पछि घर फर्किदा श्रीमानले झ पर्दा पर्यो यस्तो ल’फडा (भिडियो सहित)